10 Uninzi lwee Gadi EYurophu | Gcina A Isitimela
ekhaya > Travel Europe > 10 Uninzi lwee Gadi EYurophu
Ixesha lokuFunda: 6 imizuzu(Wagqibela ukuhlaziywa nge-: 13/11/2020)
IYurophu intle kakhulu entwasahlobo. Iinduli kunye nezitalato ziqhakaza ngemibala emangalisayo, siguqula ikona nganye ibe yimizobo emihle. Ukusuka kwizitiya zaseFrance ukuya kwiigadi zasendle zesiNgesi nakwigadi yezindlu zase-Itali, kukho iigadi ezininzi eYurophu kunayo nayiphi na enye indawo ehlabathini. Ukuba ucwangcisa intwasahlobo okanye ikhefu lasehlotyeni eYurophu ke kufuneka utyelele enye yezi 10 ezona gadi zintle eYurophu.
1. Versailles, Fransi
Imithombo yamanzi, imihlaba eluhlaza eluhlaza, yenza izitiya zaseVersailles zibe phezulu kuthi 10 ezona gadi zintle eYurophu.
800 Iihektare zomhlaba zenza igadi yaseVersailles. Iindlela ezijikayo, 35 km yemijelo yamanzi kunye nemifanekiso eqingqiweyo, Chukumisa abahambi abavela kwihlabathi liphela. Ngaphandle kwamathandabuzo, IVersailles ilungile uhambo losuku ukusuka eParis, kwaye nje ukuba ufike uya kubethwa ngumoya ngobuhle bayo.
Ufika njani kwiVersailles Gardens?
Izitiya zibekwe kwidolophu yaseVersailles, malunga neyure ngololiwe ukusuka eParis.
2. Keukenhof, Inetherlands
Engaphezulu kwe 7 Izigidi zeetulip zaseDatshi zamkela iindwendwe rhoqo entwasahlobo kwiiGadi ezintle zaseKeukenhof. Eyona gadi yeentyatyambo inkulu emhlabeni ivula amasango ayo ngo-Epreli nangoMeyi. Iitulips’ Intyatyambo sesinye seziganeko ezinkulu eNetherlands.
Ziphi iiGadi zeKeukenhof?
Izitiya ziseLisse, entliziyweni yeBollenstreek. Isiqingatha seyure ngololiwe ukusuka eAmsterdam.
3. Iigadi zeVilla D'este, ERoma i-Itali
Umzekelo omangalisayo woKuvuselela i-Itali, Izitiya zaseVille d'Este eTivoli ziyathandeka. Le gadi intle yenye ye Iindawo zelifa lemveli ze-UNESCO eYurophu.
Vula unyaka wonke, igadi ye 1000 imithombo ilungile 30 km ukusuka eRoma. Olunye lweempawu ezothusayo oya kuthi uqaphele ngalo kuyilo lwegadi eyotyiweyo, kunye nemithombo yamanzi kunye nomculo we-hydraulic.
Uyifikelela njani iVilla D'este yeGadi eTivoli?
I-Tivoli ifikeleleka ngokulula ngololiwe ukusuka eRoma emva koko ibhasi ehamba ngesikhululo sikaloliwe.
4. Isola Bella Igadi, ElamaTaliyane
Izitiya zeIsola Bella ziphakathi kweLake Maggiore. Iziqithi zeBorromean eMantla e-Itali, yimizekelo emihle yebhotwe lesimbo seBaroque kunye neegadi zase-Italiya.
Enkosi ngemozulu ethambileyo kwiBorromean Gulf, uya kufumana iintyatyambo ezininzi ezinqabileyo nezingaqhelekanga kwizitiya ze-Isola Bella. Ukwengeza, amachibi, imithombo, Kwaye neepikoko ezimhlophe ziya kugqibezela useto oluhle lwemifanekiso yakho yokuhamba.
Ulufikelela njani iIsola Bella Gardens ukusuka eMilan?
Izitiya zeIsola Bella zi uhambo losuku oluhle ukusuka eMilan. Unokuhamba ukusuka eMilan embindini ngaphakathi kweyure ngololiwe kunye ride umkhumbi ukusuka eStrsa.
Petrin Hill yindawo yokubaleka entle evela kwisihlwele sabakhenkethi. Uhlaza oluhlaza, imithi, kwaye iindlela ezijikayo zikusa kwimibono ebabazekayo yeebhulorho nenqaba yasePrague. Ngeembono zedolophu ezingalibalekiyo, Kuya kufuneka uye kwiPetrin Hill tower ebekwe kwiigadi.
Izitiya zePetrin Hill zezinye zegadi ezintle eYurophu. Unokuchitha ngokulula emva kwemini ekhululekile okanye ngentsasa edangeleyo wonwabele izimvo.
Ufika njani ePetrin Hill Gardens?
Ifumaneka kumbindi wePrague, unokuhamba okanye uthathe i-metro ukuya kwiigadi ukusuka kuyo nayiphi na ikona esixekweni.
6. Igadi yaseMarqueyssac, Fransi
Ezona gadi zibalaseleyo eYurophu ngokuqinisekileyo zizigadi zokumisa zaseMarqueyssac eFrance. Ukumiswa kwintlambo yaseDordogne yinto ebalaseleyo ngaphandle kukaAndre le Notre, umcwangcisi wegadi yaseVersailles.
Ukwahluka kwegadi kulele kubugcisa beetiyhiyali 150,000 i-boxwoods esikwe ngesandla emi kunethiwekhi yeendlela ezinje nge-maze. The gardens surround 17th-century chateaux and overlook the Dordogne valley. Ukutyelela ngokwenene imilingo, cwangcisa uhambo lwakho ngolwe-Lwesine ngokuhlwa, xa igadi ikhanyiswe likhandlela.
Ufika njani kwiiGadi zeMarqueyssac?
Izitiya zibekwe phakathi kwe nakwimimandla evelisa iwayini e France. Izitiya zeMarqueyssac zi 2 iiyure ’ train ride ukusuka eBordeaux.
7. Ibhotwe laseLudwigsburg, Jemani
Eyaziwa ngokuba yiBluhenden Barock ngesiJamani, Intsingiselo yeBaroque kwintyatyambo, Igadi yeNdlu yaseLudwigsburg intle kakhulu. Iyafana neegadi zeVersailles ezihombisa umhlaba webhotwe, isitiya saseJamani siqhakaza rhoqo entwasahlobo kwiiroses, izityalo eziluhlaza, and even a Japanese inspired garden with Bonsai trees.
Igadi yeBaroque ehambelanayo yayiyilwe ngohlobo lwaseFrance ukuxhasa ibhotwe.
Ufika njani eLudwigsburg Palace Garden?
Igadi ibekwe ngaphandle kweStuttgart, kwaye iyi 30 ukukhwela imizuzu Ukuhanjiwa kawonke-wonke.
8. IiGadi zeSiqithi saseMainau, Jemani
Ubuhle kwisiqithi seentyatyambo saseMainau kukuba kuhlala kukho into ekhulayo. Esi sitiya simangalisayo siseLake Constance. Imozulu eshushu yetropiki ilungele zombini iintyatyambo ezikweleenjiko kunye negadi yamaNgesi.
Igadi yenziwe kwi 19th inkulungwane yinkosana uNikolaus von Esterhazy. Namhlanje le 45 Iihektare ’igadi yamkela izigidi zabakhenkethi unyaka wonke kumdlalo weorchid ovula ixesha lentwasahlobo.
Ufika njani eMainau Garden?
Unokuhamba ngebhasi kwisikhululo sikaloliwe saseKonstanz, izikhephe zeemoto ezivela kwiilali ezikufutshane, okanye ngemoto.
9. Igadi yeSigurta Verona, ElamaTaliyane
Ipaki Igadi yeSigurta yiparadesi yaseNtaliyane. Le gadi intle yaqala yadalwa njenge gadi encinci ejikeleze i-villa yamafama. With time it expanded to the vast garden it is today. Giardino Sigurta garden is a sanctuary to 1,500 imithi, kunye nesigidi seentyatyambo 300 Iindidi ezahlukileyo eziqhakaza intwasahlobo nganye. Ehlotyeni i 18 amachibi egadi kunye namachibi aba yindawo engcwele yabemi kunye nabahambi abavela kwihlabathi liphela.
Ufika njani eParco Giardino Sigurta?
Igadi yeGiardino Sigurta yile 8 km kumazantsi eLake Garda kunye 25 km ukusuka eMantua. Unokuhamba ngololiwe ukusuka eVerona, emva koko uthathe ibhasi eya eValeggio Sul Mincio.
IRimini ukuya kwiVerona yamaXabiso oLoliwe
IRoma ukuya kumaxabiso eVerona
Amaxabiso eFlorence aya eVerona
IVenice ukuya kumaxabiso oLoliwe eVerona
10. IiHardbos Gardens Brussels, Bheljiyam
Kanye ngonyaka, Ihlathi laseHallerbos eHalle, Intyatyambo igadi engathi yintsomi. Enkosi kwiibluebell ezithandekayo, ukusuka ngasekupheleni kuka-Epreli ukuya phakathi ku-Meyi umhlaba oluhlaza uguqula ubukumkani obuhlaza okwesibhakabhaka.
Ngaphezu, Igadi yeHallerbos likhaya lexhama kunye nemivundla. Ukuhamba ngololiwe iyure nje ukusuka kwikomkhulu, unokungena kwiindlela ezintle ezijijekileyo zehlathi eliluhlaza. ke, ukuba ucwangcisa ukutyelela iBelgium ngentwasahlobo, khumbula ukumisa ngenye yezinto ezintle amahlathi eYurophu kwaye uthathe uhambo olujikelezayo uhambe ngendlela etyheli.
Antwerp ukuya eBrussels Amaxabiso oLoliwe
IAmsterdam ukuya eBrussels Amaxabiso oLoliwe
EParis ukuya eBrussels Amaxabiso oLoliwe
Apha Gcina A Isitimela, Siya kukuvuyela ukukunceda ucwangcise iholide yakho ukuya 10 Uninzi lweegadi eYurophu ngololiwe.
Ngaba ufuna ukufaka i-post yethu yeblogi "10 Eyona Gadi Zintle EYurophu" kwindawo yakho? Ungakhetha noba inanilethu iifoto kwaye okubhaliweyo kwaye asiphe credit kunye unxulumaniso kwesi hetalia us. Okanye nqakraza apha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/most-beautiful-gardens-europe/- (Skrolela phantsi kancinci ukuze ubone Code lungisela)
Ukuba ufuna ukuba nobubele kubasebenzisi bakho, wena ndiyabakhokela ngqo amaphepha ukufuna yethu. Kule ikhonkco, uzakufumana iindlela zethu ezithandwa kakhulu kuloliwe - https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. Ngaphakathi une link yethu ngenxa IsiNgesi emakhasini, kodwa nathi sibe https://www.saveatrain.com/de_routes_sitemap.xml, kwaye bangatshintsha / de ukuze / ts / kwaye iilwimi okanye ngaphezulu.
#ihlobo beautifulgardens europegardens EuropeTraveling Frenchgarden Spring travelbytrain